Dagaalkii Afgaanistaan ​​(2001-taako) - Wikipedia
Dagaalkii Afgaanistaan 2001-2021 Asia Daggalki Nato Waddanmaha
iyo- Taliban Afghanistan
tiswir dagallka afganistan
Dagaalkii Afgaanistaan ​​(ama Dagaalkii Mareykanka ee Afgaanistan, waxaa loo yaqaan 'Operation Enduring Freedom' - Afgaanistan ​​(2001-2014) iyo Sentinel 'Operation Freedom's (2015-hadda))   waxay raaceen duullaanka Mareykanka ee Afgaanistaan ​​ Bishii Oktoobar 7, 2001. Maraykanku markii hore waxaa taageeray Boqortooyada Ingiriiska iyo Kanada  iyo kaddib markii ay ku biireen 40 dal, oo ay ku jiraan dhammaan xubnaha NATO. Hadafyada dagaal ee ujeeddooyinka dadweynaha waxay ahayd in ay burburiyaan al-Qaacida iyo in ay diidaan saldhig nabadeed ee howlgallada Afgaanistaan ​​iyagoo ka saaraya Taalibaanka awoodda.  Dagaalkii Afqaanistaan ​​waa dagaalka labaad ee ugu dheer taariikhda Maraykanka, oo ka dambeeyey Dagaalkii Vietnam.
Kadib weerarkii 11-kii Sebtembar ee 2001-kii Mareykanka, oo madaxweyne George W. Bush uu ku eedeeyay Osama bin Laden oo ku noolaa ama ku dhuumanayey Afgaanistaan, Madaxweyne Bush ayaa dalbaday in Taalibaanka gacanta loo soo dhigo Osama bin Laden iyo in al-Qaacida laga saaro; bin Laden horeyba waxaa loo doonayay in laga soo qaado Maraykanka ilaa 1998.  Daalibaanku waxa uu diiday in uu isa soo dhiibo isaga oo aan la siinin caddayn ah inuu ku lug lahaa weerarkii 11-kii Sebtembar iyo sidoo kale hoos u dhigay dalabaadka ah in dadka kale loo dhiibo sababo la mid ah. Maraykanku wuxuu diiday codsiga caddayn ahaan sidii dib u dhigis xeelad ah,  iyo Oktoobar 7, 2001 waxay bilowday Hawlgalkii Xornimada Joogtada ah ee Boqortooyada Ingiriiska. Labadaas ayaa markii dambe ay ku biireen ciidamada kale, oo ay ka mid yihiin Waqooyiga Alliance oo la dagaallamay Dagaalkii dagaalka sokeeye tan iyo 1996-kii.  Bishii Disembar 2001dii, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa aasaasay Ciidamada Difaaca Caalamiga ah (ISAF), si ay gacan uga gaystaan ​​hay'adaha ku-meel-gaarka ah ee Afganistan iyagoo hubinaya in Kabul. Shirkii Bonn ee isla bishaas, Hamid Karzai ayaa loo doortay inuu noqdo madaxa Maamulka Kumeel-gaarka ah ee Afganistaan, kadib markii 2002-dii lagu magacaabo Loya-da (oo ah xildhibaan weyn) oo ka tirsanaa Kabul. Doorashadii caanka ahaa ee sanadkii 2004-kii, Karzai waxaa loo doortay madaxweynaha dalka, oo hadda lagu magacaabo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Afghanistan.
Apache marakanaka dhuleh dagaalka afganistan
cidaanka marakanka dagaalka
NATO waxay ku lug lahayd ISAF Bishii Agoosto 2003, kadibna sanadkaas ayaa la wareegtay hoggaanka. Marxaladdan, ISAF waxaa ka mid ah ciidamo ka kala socda 43 waddan oo ka tirsan NATO oo bixinaya inta badan awoodda.  Hal qayb oo ka mid ah ciidamada Maraykanka ee Afgaanistaan ​​ku shaqeeya amarka NATO; inta soo hartay waxay ku hoos jireen amarka tooska ah ee Mareykanka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagaalkii_Afgaanistaan_​​(2001-taako)&oldid=225189"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Nofeembar 2021, marka ee eheed 11:40.